Waaheen Media Group » Sanaag: Gaadhi qaali ah oo xukuumaddu ka bedelatay Gobolka Sanaag oo Dood dhaliyay
Browse:Home Waaheen News Sanaag: Gaadhi qaali ah oo xukuumaddu ka bedelatay Gobolka Sanaag oo Dood dhaliyay	Sanaag: Gaadhi qaali ah oo xukuumaddu ka bedelatay Gobolka Sanaag oo Dood dhaliyay
0 Comment	Ceerigaabo(Waaheen) Baabuurkan oo run ahaantii ah Gaadhi noociisa aan lagu wadan Somaliland islamarkaasna la odhan karo waa Gaadhi gaashaaman ayna ku xidhan yihiin qalabka isgaadhsiinta sida VHF, GPRS, iyo Rakaal ayaa asal ahaan kamid ahaa gawaadhi (5) ay dalka la timid hay’adda German Agro Action (GAA) oo dhawr sano kahor ka hawlgeli jirtey gobolka Sanaag. Gaar ahaan baabuurkani wuxu khaas u ahaa nin Germany ah Mr- Daniel Bromkel oo hay’addan madax ka ahaa, kaasoo si gaar ah shirkaddii baabuurtan uu kasoo iibsadey uga dalbaday inay baabuurkan u sameeyaan. Waxana qiimihiisa lagu sheegay inuu ka badan yahay US$ 70,000 (Toddobaatan un oo dollar). Lacagtaasoo ka mid ah dhaqaalihii mashruucan ee gobolka Sanaag loogu talagalay.
Waxana xilligii hay’addani gobolka ka guuraysey baabuurtaas lagu wareejyey maamulka halkaasoo Labo kamid ah bolliiska Ceerigaabo la siiyey halka laba kalena midkood lasiiyey Maayorka Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur midkoodna lasiiyey Badhasaabkii gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurre kaasoo Cali Cabdi Hurre iyo Badhasaabbadii ka danbeeyey ee Aadan Diiriye (Geejire) iyo Axmed Muxummad (Dacar) oo ugu danbayntan isagu watey midba mid kusii wareejiyey baabuurkaas.waxana waqtigaas oo baabuurtani lahaayeen lambarrada cas ee hay’adaha lagu dhejiyey lambarrada GT 914 ee xukuumadda u gaarka ah.
Haddaba iyadoo weli Badhasaabkii Sanaag Axmed Muxummad Geelle (Dacar) oo baabuurkan watey aanu kasoo laaban safar uu ugu maqan yahay Caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa wararka kasoo yeedhay waxay sheegayaan in baabuurkaas xukuumaddu ka beddeshey badhasaabkaas uguna bedeshey mid aan gaadhi ahaan iyo qiime ahaan toonna u dhigmin baabuurkaas. Taasoo dadweynha Reer-Sanaag intooda badani hadal-hayaan una arkaan baabuurkaas oo ahaa hanti u gaar ah gobolkooda in aanu gacantooda dib ugu soo laaban doonin. Waxana hadallada bulshada kasoo yeedhaya kamid ahaa:-
“Baabuurkani waa hanti gobolka Sanaag leeyahay, xukuumadduna lambar keliya ayay ku dhejiseye hanti kale kama gelin mana aqbali doonno in meel kale ama cid kale in lasiiyo. Badhasaab-Dacar waxannu leenahay xukuumaddu hadday gaadhi kusiinayso annagu kuu diidi mayno laakin baabuurkayagii waa kaa sugaynaa”.
Waxana xusid mudan in baabuurkaas furayaashiisii mid ka mid ahi weli gacanta ugu jiro dareewalkii baabuurkan Feysal Maxamed (Ficil) oo xaalad caafimaad awgeed safarkan ugu danbeeya isagu aan baabuurkan Hargeysa usii kaxayn kuna sugan Ceerigaabo. Isagoo arrintaas ka hadlayana wuxu yidhi “Furihii labaad ee baabuurkan weli anigaa gacanta ku haya”.
Xildhibaannada golaha degaanka Ceerigaabo ayaa kulan ay saaka(shalay) isugu yimaaddeen waxay kaga hadleen arrimo baabuurkani ka mid yahay taasoo wasiirka arrimaha gudaha ee cusub Cali Maxamed Warancadde ay gaadhsiiyeen kana codsadeen gaadhigaas in gacanta Sanaag/Ceerigaabo lagu soo celiyo.
“Arrintaasi waxannu saaka kala hadalnay Wasiirka Daakhiliga cusub ee xalay la magcaabay Warancadde oo markaannu u hanbalyaynay waxannu ku nidhi baabuurkaas annagaa iska leh waana in gacantayada gobolka Sanaag dib loogu soo celiyo”. Sidaas waxa yidhi Ismaacii Jaamac oo ka mid ah golaha degaanka Ceerigaabo